Isaya 7 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Shoko kuna Mambo Ahazi (1-9)
Chiratidzo chaEmanueri (10-17)
Zvinokonzerwa nekusatendeka (18-25)
7 Pamazuva aAhazi+ mwanakomana waJotamu mwanakomana waUziya, mambo weJudha, Mambo Rezini weSiriya naPeka+ mwanakomana waRemariya, mambo weIsraeri, vakaenda kunorwa neJerusarema, asi iye haana* kukwanisa kutora guta racho.+ 2 Imba yaDhavhidhi yakaudzwa kuti: “Siriya yabatana naEfremu.” Saka mwoyo waAhazi nemwoyo yevanhu vake yakatanga kudedera semiti yemusango iri kuzunguzwa nemhepo. 3 Jehovha akabva ati kuna Isaya: “Ndapota, buda unosangana naAhazi, iwe nemwanakomana wako Sheyari-jashubhu*+ panogumira mugero wemvura unobva kudziva rekumusoro+ pedyo nemugwagwa mukuru wekumunda wemugezi wenguo. 4 Unofanira kumuudza kuti, ‘Iva nechokwadi chekuti unoramba wakadzikama. Usatya, uye mwoyo wako ngaurege kunetseka nekuda kwezvitsiga izvi zviviri zvehuni zviri kupfungaira, nekuda kwekutsamwa kukuru kwaRezini neSiriya nemwanakomana waRemariya.+ 5 Nekuti Siriya naEfremu nemwanakomana waRemariya varonga kukuitira zvakaipa, vachiti: 6 “Handei tinorwisa Judha tiibvarure-bvarure,* toikunda,* toitora, uye ngatigadzei mwanakomana waTabheeri kuti ave mambo wayo.”+ 7 “‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Hazvizobudiriri,Uyewo hazvizoitiki. 8 Nekuti musoro weSiriya iDhamasiko,Uye musoro weDhamasiko ndiRezini. Uye makore 65 asati aperaEfremu achaparadzwa uye rudzi rwake haruzovipo.+ 9 Musoro waEfremu iSamariya,+Uye mwanakomana waRemariya ndiye musoro weSamariya.+ Kunze kwekunge muine kutenda kwakasimba,Umambo hwenyu hahuzosimbi.”’” 10 Jehovha akaenderera mberi nekutaura naAhazi achiti: 11 “Kumbira chiratidzo kuna Jehovha Mwari wako;+ chingava chakadzika seGuva* kana kuti chakakwirira sedenga.” 12 Asi Ahazi akati: “Handisi kuzokumbira, uyewo handisi kuzoedza Jehovha.” 13 Isaya akabva ati: “Ndapota, teererai, haiwa imi imba yaDhavhidhi. Zvamuri kuita zvekuedza vanhu kusvika vatsamwa zvidiki here? Mava kufanirawo kuedza Mwari kusvika atsamwa here?+ 14 Saka Jehovha pachake achakupai chiratidzo: Inzwai! Musikana* achava nepamuviri, uye achabereka mwanakomana,+ omutumidza kuti Emanueri.*+ 15 Pachazosvika nguva yaanenge ava kuziva kuramba zvakaipa uye kusarudza zvakanaka, anenge ava kutodya ruomba neuchi. 16 Nekuti mukomana wacho asati ava kugona kuramba zvakaipa uye kusarudza zvinhu zvakanaka, nyika yemadzimambo maviri auri kutya zvikuru ichange yava dongo.+ 17 Jehovha achakuunzira iwe nevanhu vako neimba yababa vako nguva isina kumbovapo kubvira pazuva riya Efremu paakazvibvisa kuna Judha,+ nekuti Mwari achaunza mambo weAsiriya.+ 18 “Pazuva iroro Jehovha acharidzira muridzo nhunzi dziri kuhova dziri kure dzaNire yeIjipiti nenyuchi dziri munyika yeAsiriya, 19 uye dzese dzichauya dzomhara mumipata ine mawere,* nepamikaha yematombo, nepanzvimbo dzese dzinonwisirwa zvipfuwo mvura. 20 “Zuva iroro, Jehovha achaveura musoro nemvere dzemumakumbo achishandisa chisvo chinoita zvekubhadharwa chinobva kunharaunda yeRwizi,* iye mambo weAsiriya,+ uye chisvo chacho chichabvisawo ndebvu. 21 “Zuva iroro munhu achachengetedza tsiru pamombe dzake nemakwai maviri zviri zvipenyu. 22 Uye kuwanda kwemukaka kuchaita kuti adye ruomba, nekuti munhu wese anosara munyika yacho achadya ruomba neuchi. 23 “Zuva iroro, kwese kwaimbova nemizambiringa 1 000 inokosha masirivha 1 000, kuchangova nemakwenzi eminzwa nemasora. 24 Varume vachaendako nemiseve neuta, nekuti nyika yese ichava makwenzi eminzwa nemasora. 25 Hauzosviki pedyo nemakomo ese aimbosakurwa nebadza, nemhaka yekutya makwenzi eminzwa nemasora. Achava mafuro emombe nenzvimbo inotsikwa-tsikwa nemakwai.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “ivo havana.”
^ Kureva kuti “Pachangova Nevashoma Vachadzoka.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “tiityise.”
^ Kana kuti “tinopaza neparusvingo rwayo.” ChiHeb., “tinoitsemura tiivhure.”
^ Kana kuti “Mukadzi wechidiki.”
^ Kureva kuti “Mwari Anesu.”